lundi, 09 janvier 2017 20:52
Ritra ny ranon'Anony: Mitsingevana ny trondro
Ritra tanteraka ny rano. Raha ny teny Ampasika manokana dia raikitra ny fisakana trondro, maro ireo nahazo betsaka.
Misy ireo mitsingevana fotsiny.
Nampitandrina ihany ireo tompon'andraikitra amin'ny fihinanana ireny trondro ireny sao efa maty, nefa tsy voasakana ny olona.
Maro ireo avy dia mihinana, ao kosa ny mivarotra izany. Misy mivarotra 2000 Ariary ny kilao ary ny hariva teo dia efa niakatra ho 5000 Ariary
lundi, 09 janvier 2017 18:25
Antanamabao Sotema-Mahajanga : Maty nisy namono i Flavien mpanao moraingy
Isan’ireo mpikatroka fantadaza eo amin’ny taranja moraingy ao amin’ny Fokontany Antanambao-Sotema i Flavien na Lalavy.
Nisy ny lalao nandraisany anjara omaly alahady hariva ka nivoaka ho mpandresy i Flavien. Nody nanatitra ny vola sy ny loka azony tany amin’ny vady aman-janany.
Ora vitsy taorian’izay, dia niera tamin’ny vadiny i Lalavy mba hivoaka kely. Tany anefa izy dia tsy niverina, fa ny vatany efa nitsirara tao anaty rano maloto, tsy nisy aina intsony no hitan’ny olona androany maraina.
Eo ampelan-tananan’ny mpitandro ny filaminana ankehitriny ny raharaha.
lundi, 09 janvier 2017 18:07
Andapa: Un Mini-bus se retrouve dans un ravin, 1 mort
A cause d'une surcharge, le minibus transportant des jeunes supporteurs de foot-ball d'Ambodivoara Sambava s'est retrouvé dans un ravin dans la zone de Masiaposa, 8km d'Andapa hier dimanche 8 janvier.
Le chauffeur était mort sur le coup, un jeune se trouve un bras cassé, les autres sortis indemnes.
Cette équipe a déjà eu le même accident le 18 décembre 2016 et il y avait eu un mort aussi parmi ses supporteurs.
lundi, 09 janvier 2017 18:03
Antalaha : Mpangalatra lavanila iray voatifitra
Jiolahy roa no tra-tehaky ny tompony teo ampiotazana lavanila tany Andampy Antalaha alina ka avy hatrany dia notifiriny.
Voa teo amin’ny tongony ny iray ka lavo. Nandositra ny namany saingy tsy lasa lavitra dia tratra ka niharan’ny fitsaram-bahoaka rehefa taitra ny manodidina, izay efa mandry tsy lavo loha noho ny firongatry ny halatra lavanila tato ho ato.
Efa eo ampelan-tanan’ny Polisy ny raharaha izay nanokatra fanadihadiana. Nibaboka ireo jiolahy fa efa misy olona mpandray ny lavanila halatra avy amin’izy ireo ka 7.000 Ariary ny kilao ividianany azy.
lundi, 09 janvier 2017 17:33
Sambava : Ho rava ve ny section basket-ball ?
Tsy misy afa-tsy iray ihany ny ekipa baskety eto Sambava amin’izao dia ny ABBS Académie Basket-Ball de Sambava. Tsy afaka miroso amin’ny fananganana na fanavaozana ny birao anefa raha tsy manana ekipa roa farafahakeliny. Efa atomotra ihany koa ny fanavaozana ny federasiona.
Nahoana no mitsilopilopy ny eo amin’ity sehatra ity eto amin’ny renivohitra ny Faritra SAVA, ao Antalaha irery ihany no mba manana ekipa baskety telo, fa Andapa sy Antalaha ary ny eto Sambava dia samy tokana avokoa. Ny tanora ve no tsy rototra sa ny fitantanana ity taranja ity no mila hatsaraina ?